Naxaas - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Silver)
Naxaas (ingiriis: Silver) astaanta (Ag) waa curiye kimiko oo tirada atomkiisu tahay afartan-iyo-todoba (47). Curiyaha Naxaastu waa bir ka tirsan Transitional Metalska ee guruubka 11aad ee Diwaanka Curiye.
Naxaastu waa bir jilicsan, leh midab cad oo iftiimaya, taas oo leh gudbinta ugu fiican ee kulka iyo korontada dhamaan 118 Curiye ee dhulka, cirka iyo badaha laga helo. Naxaasta waxaa si dabiici ah looga helaa oogada sare ee dhulka, ayadoo isku dhisyo jaandi ah inta badan ku ladhan dahabka, Sinkiga, Koberta iyo biro kale.
Naxaasta waxaa la isticmaali jirey tan iyo wakhti hore, ayadoo laga samayn jirey shilimaanta iyo sheeyada la isku qurxiyo. Maantana waxaa ugu badan ee loo isticmaalaa waa xadhgaha korontoda, taleefanada, fiidhiyowyada, gaadiidka, filimka sawirka, milano lagula dagaalamo baakteeriyada, iyo maalgashi warshadaha ayadoo shilinka naxaasta ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Naxaas&oldid=143714"
Last edited on 28 May 2015, at 13:44
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 13:44.